Afhayeen baarlamanaka Soomaaliya oo amray xildhibaannada Muqdisho ka maqan degdeg in ay ku yimaadaan. – Radio Daljir
Afhayeen baarlamanaka Soomaaliya oo amray xildhibaannada Muqdisho ka maqan degdeg in ay ku yimaadaan.
Nofeembar 7, 2012 11:42 b 0
Muqdisho, Nov 07 – Guddoomiyaha golaha wakiillada ee dawladda federaalka Prof. Maxamed Sh. Ismaaciil ‘Jawaari’ ayaa faray xildhibaannada baarlamaanka ee bannaanka uga maqan magaalada Muqdisho in ay si degdeg ah ugu soo xaroodaan xarunta wakiillada oo ah Muqdisho.
Md. Jawaari, ayaa carrabka ku adkeeyey ahmiyadda iyo lagama maarmaanimada imaatinka mudanayaasha dibadda iyo gobollada kale ee dalka ku maqan, maadaama uu haatan socdo fadhigii xildhibaannada dawladda federaalka.
Mudanayaal badan oo baarlamaanka Soomaaliya ka mid ah, ayaa safarro shaqo iyo kuwo shaqsiyadeed ugu maqan meelo kala duwan oo gudaha dalka iyo bannaankiisaba iskugu jira, waxaana guddoomiyuhu u qabtay todobo maalmood in ay ku yimaadaan.
Hadalkaan ayaa afhayeenka baarlamaanku ka jeediyey fadhigii wakiillada ee maanta, kaasoo qayb ka ahaa kulamo xiriir ah oo xildhibaannadu ay uga doodayeen qodobada uu xeer-hoosaadkoodu ka kooban yahay.
Doodda wakiillada ee hadda socota ayaa ah mid ayaa mid kulul, oo ku salaysan qotominta masiirkoodii ay isku maamuli lahayeen, iyadoo sidoo kalena la filayo dhawaan kulamo kale oo miisaan leh in ay dhacaan, uuna ka mid yahay mid lagu horkeenayo wasiirrada cusub.
Caawa iyo Daljir_Arbaca_Nov 7-2012_Maxamuud Cabdi Ibraahim ( Daljir Boosaaso)
Dood ku saabsan farqiga u dhaxeeya xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga Maraykanka (Dhagyaso)